Trump oo ku sannifay madixii hore ee CIA-da Maraykanka | Saxil News Network
Trump oo ku sannifay madixii hore ee CIA-da Maraykanka
August 16, 2018 - Written by xasan qamaajiicir
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, John Brennan, kala laabtay ogolaanshihii u saamaxayay in uu galaangal u yeesho xogaha sirta ah ee qaranka, taa oo ka dhigan in madaxweynaha uu u diidayo dadka dhaliilsan siyaasadda maamulkiisa in ay helaan macluumaadka xasaasiga ahi.
Madaxa warfaafinta ee Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo, Sarah Sanders, ayaa go’aankaasi ku shaacisay warbixin qoraal ah oo uu soo diray madaxweyne Trump.
Sida warbixintaasi ku cad, madaxweyne Trump ayaa tallabadaasi ku saleeyay “hab-dhaqanlka khaldan iyo dabeecadda” Brennan.
Madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, John Brennan oo ka jawaabaya eedeymahaasi ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in tallaabadaasi ay qayb ka tahay dedaallada baaxadda leh ee madaxweyne Trump uu ugu jiro “cabburinta xorriyatul qowlka iyo ciqaabidda dadka isaga dhaliilsan”.
“Waa tallaabo ay tahay in ay ka walwalaan dhammaan dadka Mareykanka, sida xirfadleyaasha sirdoonka, taa oo ah cawaaqibka ka dhalanaya qofka in uu ra’yigiisa ka hadlo. Mabaa’diideydu waa ay ka weyn yihiin ogolaansho, marnana ka noqon maayo.”
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @JohnBrennan
11:41 PM – Aug 15, 2018
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @JohnBrennan
Brennan ayaa mar sii horreysay sheegay in qaabkii uu u hadlay Trump kaddib markii uu bishii Luuliyo magaalada Helsinki kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ahaa “mid aan khiyaano qaran waxbo dhaamin”.
Sanadkii la soo dhaafayna, Brennan waxa uu sheegay in ay “sax tahay” baaritaannada lagu hayay suurtagalnimada in saraakiisha u ololeynayay madaxweyne Trump xilligii doorasahadii madaxtinimada ee sanadkii 2016 ay la shaqeynayeen Rushka.
Madaxweyne Trump ayaa dhawr jeer oo hore beeniyay eedeymahaasi, waxa uuna ku tilmaamay “kuwa siyaasadeed oo isaga lagu ugaarsanayo”.
Arbacadii la soo dhaafay ayaa Trump oo wareysi siiyay wargeyska The Wall Street Journal, waxa uu sheegay in Brennan ay ahayd in uu kala noqdo ogolaanshaha helitaanka macluumaadka sirta ah balse ay arrintaasi “aad ugu adkaatay”.
Maxaa lagu sheegay warbixinta Trump?
“Maadaama aan ahay madaxa fulinta ee dowladda iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka, waxaa isaaran mas’uuliyad dastuuri ah oo ah in aan ilaaliyo xogaha sirta ah ee dalka, sida in aan xaddido helitaanka xoganahi. Waxaan go’aansaday in John Brennan oo ahaan jiray madixii hore ee waaxda sirdoonka dalka aan kala laabto ogolaanshihii helitaanka macluumaadka sirta ee qaranka.
“Caadiyan, dadka madaxda ka ahaan jiray sirdoonka iyo laamaha kale ee sharci-fulinta ayaa loo ogolaan jiray in ay helaan xogaha sirta ahi ee dalka si ay talo u siin karaan dadka xilka kala wareegay, gaar ahaanna kuwa khuseeya arrimaha ay aqoonta iyo xirfadda u leeyihiin.
“Arrimahani oo dhan ma anan kuwo qiil u noqonaya Brennan, oo uu ku sii haysan karayo ogolaanshaha helitaanka macluumaadkani.”
Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in Trump uu sidoo kale eegaya in iyaguna uu kala noqdo ogolaanshaha helitaanka xogta sirta ee qaranka madaxii hore ee FBI-da, James Comey, oo sannadkii hore uu shaqada ka eryay iyo xeer ilaaliyihii hore Sally Yates.
Madaxdaasi hore maxay ka yirahdeen?
James Comey wuxuu madaxweyne Trump ku tilmaamay mid “anshax ahaan aanan u qalmin” hoggaan.
Comey oo ka falcelinaya arrinta Brennan ayaa yiri ” Mar kale, madaxweynuhu waxa uu dirayaa farriin ah in uu ciqaabayo dadka aan ku ra’yiga ahayn, waxa uuna abaalmarinayaa dadka isaga faaniya.”
Waxa uu intaasi ku daray “ogolaanshaha helitaanka xogta sirta ah ee qaranku ma ahan in loo isticmaalo siyaasad, oo aan codbixiyeyaashu laga weecin dhibaatooyinka waaweyn ee ay wajahayaan”.
Comey ayaa sidoo kale yiri “waa nin maalin kastaa been u sheegaya dadka Mareykanka, dhiirigeliya cunsuriyadda, dumarka liidaya isla markaana dantiisa oo kaliya fiirsanaya “.
James Clapper ayaa fadeexaddii Watergate ee dalkaasi Mareykanka ka dhacday sanadkii 1972 barbar dhigay baaritaannada eedeha sheegaya in Ruushka uu faragelin ku sameeyay doorashada madaxtinnimada ee Mareykanka ee sandkii 2016.
Michael Hayden oo si toos ah u weeraray maamulka madaxweyne Trump ayaa bishii Juun waxa uu Twitter-kiisa soo dhigay sawir muujinaya xero maamulkii Naaziga ee Jarmalka uu dadka ku laayi jiray, waxa uuna cinwaan uu uga dhigay “Dowladaha kale xitaa waxa ay kala geeyeen carruur iyo hooyooyinkooda.”
Tallaabadani uu haatan Trump qaaday ayaa waxaa ka dhashay cambaareyn aad u weyn.
Xoghayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u dhaqmayo sida hoggaamiyaha jamhuuriyad uusan sharci ka jirin isla markaana aanan isku filnayn.
Dad kale ayaa Trump ku eedeeyay in uu isku dayayo inuu cabburiyo dadka siyaasaddiisa dhaliilsan.
by cali qamaaciir